Talooyin ku saabsan doorashada Taleefoonka aan xarkaha lahayn ee Guriga ugu Fiican Gurigaaga | Androidsis
Taleefanka tooska ahi wuxuu qayb muhiim ah ka yahay guriga marka la dooranayo shirkad taleefan oo na siisa saddexda adeeg ee aasaasiga ah: Telefishanka, Internetka iyo taleefanka. Waqti dheer kadib boosteejooyinka go'an ayaa loo beddelay in lagu isticmaalo gudaha guriga iyada oo aan loo baahnayn fiilooyin.
Xulo a taleefanka xariga Ma aha hawl fudud, waxaa jira noocyo badan iyo moodooyin badan oo la heli karo, mid walbana hawlo kala duwan leh oo leh tayo ka sii xun ama ka wanaagsan. Xaaladdan oo kale waxay kuxirantahay Haddii aad raadineyso taleefan guri ama shaqo ah, waxay inta badan ku xirnaan doontaa midka sida ugu fiican ugu habboon baahiyahaas.
Kuwa badan maanta waxay wadaagaan hawlo badan oo taleefanka gacanta ah, kuwaas oo ay ka mid yihiin tusaale ahaan awoodda ka jawaab celinta wicitaanada haddii aadan guriga joogin, wicitaannada fiidiyowga iyo waxyaabo kale oo dheeri ah. Telefoonada bilaa xadhkaha ah waxay soo mareen waddo dheer waxayna rabaan inay nala joogaan wakhti dheer.
Waan ku tusi doonaa wax kasta oo aad u baahan tahay inaad ogaato markaad dooranayso taleefan aan xadhig lahayn:
1 Tirada boosteejada
2 Soo noqnoqoshada calaamadaha
3 Taleefanka GSM / 3G / 4G
4 Moodooyinka Wi-Fi iyo Bluetooth
5 Telefoon Landline ah oo leh VoIP
6 Analog iyo digital
Waa lagama maarmaan in la ogaado taleefannada aan u baahan nahay xilligaas saxda ah, Haddii aad keligaa ku nooshahay guriga midna way kugu filnaan doontaa, haddii aad tahay dhowr qof oo ka tirsan qaybta qoyska waxaa lagugula talinayaa inaad doorato wadarta laba boosteejo. Qodob kale oo muhiim ah ayaa ah haddii cabirka guriga uu yahay mitir ku filan waa inuu lahaadaa ugu yaraan laba cutub.
Suuqa dhexdiisa waa suurtagal in laga iibsado a Duo ama Trio, dhammaantood waxay lahaan doonaan saldhig lacag lagu dalacoKuwani waxay ku habboon yihiin xitaa xafiiska maaddaama ay aad u fudud yihiin rakibiddooda. Heerka GAP waa qodob kale oo laga fiirsado mustaqbalka haddii aad rabto inaad iswaafajiso laba soo saare oo kala duwan.
Xaaladda helitaanka Duo, waxaa lagama maarmaan ah in la sheego in labaduba ay la yimaadaan laba saldhig, waa lagama maarmaan ugu yaraan laba baytari mid kasta oo iyaga ka mid ah, Fiilooyinka RJ-11 si loogu xiro loona waafajiyo shabakadda. Dhammaantood waxay leeyihiin buug lama huraan ah ugu yaraan markay ku rakibayaan dhawr tallaabo.
Soo noqnoqoshada calaamadaha
Markaad dooranaysid taleefan aan xadhig lahayn, barta kale ee go'aamintu waa inay noqotaa inta jeer ee baaqa, gaar ahaan markay jiraan derbiyo iyo albaabbo. Wireless-kii hore wuxuu isticmaali jiray inta jeer 900 MHz, qaar baa maanta jira, laakiin waxaa lagugula talinayaa inaad raadiso mid leh mowjad aad u sareysa, ugu yaraan 2,4 GHz.
Waxaa jira khadadka taleefannada guryaha ee wireless-ka leh oo gaaraya illaa 5,8 GHz, haddii ay sidaa tahay waa kuwa ugu horumarsan suuqa oo ka sarreeya celceliska. Is-maamulku wuxuu ku dhow yahay 300 mitir, dhammaantoodna tayo la'aan iyo iyada oo aan dhab ahaan wax faragalin ah la isticmaalin balaca la mid ah routerka, aaladda hagta ama qalabka kale ee elektarooniga ah guriga.
Ayaa hadda ahaa Heerka DECT 6.0 la sii daayay, wuxuu adeegsadaa soo noqnoqoshada 1,9 GHz waxayna isticmaashaa xaddiga loo yaqaan 'bandwidth' ee u gaarka ah kaas oo aysan ku yeelan doonin faragelin qalab kale. Inuu doorto mid ka mid ah noocan ah wuxuu ka dhigayaa inay ku shaqeyso mowjaddeeda mana la kulmi doonno dhibaatooyin xilligan ama mustaqbalka.
Taleefanka GSM / 3G / 4G
Waqtigan xaadirka ah khadka taleefanka dhulka ee wireless kasta wuxuu kuxiranyahay khadka taleefanka iyadoo loo marayo RJ-11 iyo xariiriyaha ilaa kan hada socda, laakiin waxaa jirta suurtagalnimada inay u shaqeyn karaan sidii iyagoo mobiil ah madaama meesha aad ku nooshahay aysan lahayn caymis. Moodooyinka cusub waxay leeyihiin boos loogu talagalay SIM waxayna ka shaqeeyaan shabakadda moobiilka.
Xaaladdan oo kale xalka ayaa ah in la rakibo mid, kaas oo hawlwadeenku ku siinayo SIM-ka, dhaqaajiso kaarka oo ku xir wax walba sidii ay tahay taleefan aan xadhig lahayn. Shabakadaha GSM / 3G / 4G waa kuwo la isku halleyn karo, waxaad awoodi doontaa inaad ka hadasho masaafad kasta haddii ay taasi dhacdo waxay ku xirnaan doontaa baytariyada sida wireless kasta.
Moodooyinka Wi-Fi iyo Bluetooth
Taleefanka bilaa xadhigga ahi wuxuu u isticmaali doonaa khadka taleefanka si uu u soo waco, adeegsiga isku xirka Wi-Fi ayaa kuu oggolaanaya inaad ku xirnaato internetka labadaba in la helo iyo in la diro emaylka, la helo oo la qoro farriimo, la tasho buugga taleefanka, la iswaafajiyo xiriirada, la doorto laxan, dhageysiga muusikada iyo waxyaabo kale oo badan.
Waxyaabaha dheeriga ah qaarkood waxaan u weecin karnaa wicitaanada taleefanka gacanta, Tani waxay naga dhigeysaa inaanan marnaba ka baaqan wax wicitaanno ah oo aan awoodi karno inaan la xiriirno dadka ugu dhow. Moodooyinka qaar waxay leeyihiin Bluetooth si ay ugu xirmaan taleefanka oo ay u soo dejisan karaan liiska xiriirka, kuwa ku hadla, sameecadaha dhagaha iyo dhaqaajinaya gacmaha-bilaashka ah.
Telefoon Landline ah oo leh VoIP
Shaqeeyayaal badan ayaa isticmaalayay VoIP, oo loogu yeero wicitaanada taleefannada guryaha iyo moobilada iyadoo la adeegsanayo internetka oo aan lahayn wax kharash ah. Waqtiga laga soo gudbay waxay si aad ah u soo fiicnaaneysay waana khamaar cad oo loogu talagalay wicitaannada bilaashka ah iyada oo la adeegsanayo xiriirka internetka ee nolosha.
Analog iyo digital
Analog wuxuu isticmaali doonaa mowjadaha 900 iyo 2,4 GHz, Qaar ka mid ah moodellada analogga ah xitaa waxay adeegsadaan xawaare dhan 5,8 GHz, laakiin sidoo kale kuwa dhijitaalka ah. Analogga wuxuu bixiyaa heer xun iyo tayada codka oo sir ah, laakiin kiiskan wuxuu luminayaa dijitaalka dhammaan kiisaska.
EQaabka dhijitaalka ah (tusaale ahaan DECT 6.0) wuxuu bixin doonaa tayo sare oo cod aad u sarreysa iyo wada hadallo sir ah oo leh jaantus darajo sare leh. Kuwa dhijitaalka ahi waxay ku darayaan shaqooyin dheeri ah analogyada, halkan isticmaalahu wuxuu ku xirnaan doonaa isticmaalka uu siin doono taleefanka la sheegay.
Wadada buuxda ee maqaalka: Androidsis » Noticias » Talooyin ku saabsan doorashada taleefanka bilaa xadhigga ah ee ugu fiican gurigaaga